Diego Simeone oo sheegay inay u muuqato inuusan heshiiska u cusbooneysiin doonin Atletico – Gool FM
Diego Simeone oo sheegay inay u muuqato inuusan heshiiska u cusbooneysiin doonin Atletico
(Madrid), 28 Sebt, 2016 –Tababaraha kooxda Kubadda Cagta Atletico Madrid ee Waddanka Spain, Diego Simeone oo caawa kooxdiisu ay ciyaar adag la dheeli doonto kooxda Bayern Munich taasoo ka tirsan Champions League ayaa sheegay in dhowaan uu soo afjari doono waayihiisa kooxda Atletico.
“Intii karaankayga ahayd waa u qabtay kooxdan mar walbana waan u qabanayaa, cid walba way ogtahay taas” ayuu Simeone u sheegay ‘Mediaset Premium’.
Kooxda Inter ee Talyaaniga ayaa iyadu si weyn loola xiriirinayaa inay soo kireysan doonto macallinkan oo ay mar walba diyaar u tahay.
“Taasi sidoo kale micneheedu ma ahan inaan heshiiska u cusbooneysiin doono Atletico, waxaan nahay tababareyaal kubadda cagta ah, wax walbana way dhici karaan, aniga intii awooddayda ahayd waan siiyay Atletico” ayuu sii raaciyay Macallin Simeone.
Dhinaca kale wiilka uu dhalay Simeone oo lagu magacaabo Giovanni ayaa goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay kooxda Serie A-da ee Genoa xilli ciyaareedkii tegay, taasoo uu Simeone sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay.
“Waan ku faraxsanahay, waxa uu doonayaa inuu isi soo muujiyo, Horyaalka Serie A-da waa Horyaal adag, waana inuu si adag u shaqeeyaa, weligeey kalama hadlin cayaarihiisa, waayo isaga ayay tahay inuu khibraddiisa gaarka ah kaashado” ayuu ku soo geba gebeeyay Simeone.
CL - Guruub A: Theo Walcott oo guul ay ka gaareen Basel ku hoggaamiyey Arsenal, xilli PSG ay guul soo labasho ah ka gaaray Ludogorets